Ukuphucula i-WordPress 'yokuKhangela okuPhakathi kweSiza ngokuKhangela okuPhambili kweJetpack | Martech Zone
Ukuziphatha kokukhangela abathengi kunye neshishini kuyaqhubeka nokutshintsha njengoko benjalo ukuzisebenzela kwaye bafune ulwazi abaludingayo ngaphandle kokunxibelelana nenkampani yakho. Ngelixa iirhafu, isonka, imixholo enxulumene noko, kunye noyilo zizinto ezibalulekileyo zomsebenzisi ezinceda iindwendwe, ukukhangela indawo yangaphakathi idla ngokungahoywa.
Uphendlo lweSiza seWordPress
Ngelixa iWindowsPress ibinokusebenza kokukhangela ngaphakathi ukusukela oko yaqalwa, ixhomekeke ikakhulu kubuchule bomhleli bokulungiselela izihloko, iindidi, iithegi kunye nomxholo.
Oko kunokuzisa imiba yamava, nangona kunjalo. Ukuba ulungiselela uphando lwangaphakathi kwaye ungaphulukana nokuzibandakanya kumxholo wakho. Ukulungiselela abafundi kwaye ungaphulukana nokuchaneka ngokukhangela ngaphakathi kweWordPress. Kwaye ukuba usebenzisa iWoocommerce, oko kuthetha ukuba ulahlekelwa yintengiso.
Abantu abakwiindawo ze-eCommerce 2x ngakumbi ukuthenga into xa bekhangela
IJetpack yokuKhangela okuPhambili kweSiza
Inkampani yabazali yeWordPress iyaqhubeka nokubonelela ngeenkonzo ezihlawulelweyo kunye nezongezo, enye yeeplagi ezaziwayo jetpack. IJetpack yiplagi emnandi enokusetyenziselwa ukugcina indawo yakho ikhuselekile, yonyusa isantya sendawo yakho, ukuphucula amandla endawo yakho, kwaye unike ingxelo ngayo ngephakheji yokuqina eqinileyo.
Mhlawumbi enye yezona zinto zinomdla, nangona kunjalo Ukukhangela kweJetpack… Ukuphuculwa okumangalisayo kwiWordPress 'yokukhangela enika amandla abasebenzisi ngokubekwa phambili ngokubaluleka, iifilitha, kunye nokukhangelwa ngokwamaqela ezithuba, amaphepha, iimveliso, kunye nolunye uhlobo lwesithuba seposi. Iimpawu zibandakanya:
Iziphumo ezifanelekileyo kakhulu ezinokuhlelwa kweempawu zangoku
Ukunyusa kunye nokubekwa phambili kweziphumo ngokusekwe kwizibalo zendawo yakho
Ukukhangela kwangoko kunye nokucoca ngaphandle kokulayisha kwakhona iphepha
Ukukhangela okucociweyo kunye nezinto ezinamacandelo
Ukuphuculwa komxholo wokuhambelana kwidesktop kunye nakwiselfowuni
Isalathiso sexesha lokwenyani, ke isalathiso sakho sokukhangela siza kuhlaziya ngaphakathi kwemizuzu yotshintsho kwindawo yakho
Inkxaso yazo zonke iilwimi, kunye nohlalutyo lolwimi oluphambili kwiilwimi ezingama-29
Amagqabantshintshi aphawuliweyo kumagqabaza kunye nomxholo weposti
Ulungiso olukhawulezileyo noluchanekileyo lopelo
Ukuba abantu banokufumana iimpendulo abazifunayo ngokukhawuleza ngaphandle kokundithumelela i-imeyile, yigolide esulungekileyo kwaye yenza umsebenzi wam ubelula. Ndiyayithengisa kudliwanondlebe nabaxumi bam kwaye ndixelele abantu ukuba bayisebenzise kuba iyasebenza.
UKylie Mawdsley, uMcebisi woYilo lwangaphakathi, UKylie M. Interiors
Martech Zone Usesho lweSayithi
Ndihlaziye ukukhangela indawo yethu Martech Zone ukufaka Ukukhangela kweJetpack ukuze uzibonele ukuba ungcono kangakanani amava omsebenzisi. Abasebenzisi banokuthi babeke phambili kwiziphumo ngokubaluleka okanye ubudala besithuba. Okanye, banokucoca iziphumo ngokusekwe kudidi, iithegi, okanye unyaka opapashwe ngawo.
Abalawuli banokwenza unxibelelwano lwangaphakathi lokukhangela kunye noyilo ngeendlela ezininzi:
Ukuseta iodolo yohlobo olungagqibekanga ngokubaluleka, entsha, okanye eyona indala.
Ukwenza umxholo omnyama okanye okhanyayo.
Ukuvula ukugquma okungaphezulu xa umsebenzisi eqala ukuthayipha okanye xa becofa ukukhangela.
Amandla okungabandakanyi izithuba, amaphepha, iintlobo zeposi, okanye imithombo yeendaba.
Amandla okukhetha kwiifomathi ezahlukeneyo.
Amandla okutshintsha indawo yangasemva yokugquma.
Amandla okutshintsha umbala oqaqambileyo wamagama ophando afunyenwe kwiziphumo zokukhangela.
Ukukhangela kweJetpack luphuculo oluhlawulelweyo olunokuxabiswa ngokwahlukeneyo okanye ludityaniswe nephakheji yakho yeJetpack iyonke.
Ukuphucula kuPhendlo lweJetpack
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Singamalungu e Ukukhangela kweJetpack.
tags: jetpackjetpack iplagiukukhangela indawoWordPressiplagi yamagamaiiplagi zegamaUkukhangela indawo ye-wordpress